तपाईंको छालाको प्रकार र सान्त्वनाको अनुसार अनुहारका १० प्रकारहरू - PAMPEREDPEOPLENY.COM - सुन्दरता
तपाईंको छालाको प्रकार र सान्त्वनाको आधारमा अनुहारको १० प्रकारहरू
घर सुन्दरता छाला हेरचाह छाला हेरचाह oi-Lekhaka द्वारा सोम्या ओझा अक्टुबर १,, २०१। मा
अनुहार एक आवश्यक मासिक सौन्दर्यि अनुष्ठान हो जुन तपाईंको छालाको उपस्थिति र अनुभव बदल्न सक्छ। उमेर देखि, महिलाहरु आफ्नो छाला कायाकल्प गर्न र यसको समग्र कल्याण प्रमोट गर्न फेशियल भइरहेको छ। अधिक मात्रामा, अनुहार मासिक आधारमा गरिनु पर्छ, किनकि यो अधिक गर्नु राम्रो भन्दा राम्रो हानिकारक हुन सक्छ।
जे होस्, तपाईले आफ्नो नियमित पार्लरमा जानु भन्दा पहिले वा अनुहारको किटमा पैसा फिर्ता लिनु अघि, तपाईंले अनुहारको प्रकार पत्ता लगाउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ जुन तपाईंले जानुपर्दछ। यो तपाईंको छालाको प्रकारमा निर्भर गर्दछ साथै छालाको चिन्ता जुन तपाईं ग्रस्त हुनुहुन्छ। यदि तपाईंलाई कस्तो अनुहार लाग्ने भनेर पत्ता लगाउन गाह्रो भइरहेको छ भने, हामीले तपाईंलाई कभर गर्यौं।
आजको जस्तो, बोल्डस्कीमा हामीले १० विभिन्न प्रकारका अनुहारहरू शून्य गर्यौं जुन छालाको प्रकार र चासोमा निर्भर गर्दै व्यक्तिले छान्नु पर्छ।
त्यसोभए, विभिन्न फेशियलहरू र छालाको प्रकारको बारेमा सिक्नको लागि पढ्नुहोस् जुन उनीहरूलाई उपयुक्त छन्।
१. छाला संयोजन को छाला को लागी
नामले देखाउँदछ, संयोजन छाला दुबैको, तेल र शुष्क छालाको मिश्रण हो। त्यसोभए, यदि तपाईं पनि यस छालाको प्रकार हुनुहुन्छ भने, त्यसोभए तपाईंले फल फेशियलका लागि विचार गर्नुपर्छ।
फल अनुहारमा मलिक एसिड, साइट्रिक एसिड र टार्टरिक एसिड जस्ता विभिन्न एसिडहरूको उपस्थितिले छालाको प्रकारको संयोजनमा फाइदा लिन सक्छ।
२. तेल छालाको लागि पर्ल अनुहार
तेल छाला हेरचाह गर्न गाह्रो हुन सक्छ किनकि यो कुनै अन्य छालाको प्रकारको भन्दा बढी एक्ने प्रवण हुन्छ। त्यस्ता समस्याहरूबाट राहत पाउनका लागि, यस विशिष्ट छालाको प्रकारका मानिसहरूले मोतीको अनुहार छान्नु पर्छ।
यस अनुहारमा, एक मोती क्रीम र मास्क छालाको सतहबाट अतिरिक्त सिम्बुम शोषणको लागि प्रयोग गरिन्छ। यस बाहेक, यो अनुहारले तपाईंको छालालाई पनि चिल्लो देखिन रोक्न सक्छ र एक्ने फ्लेयर-अपहरू रोक्न सक्छ।
Gal. सुक्खी छालाका लागि ग्याल्भेनिक अनुहार
सुख्खा छाला फ्लाकी हुन्छ र डिहाइड्रेटेड देखिन्छ। यदि तपाईं कोही हुनुहुन्छ जसको छालाको प्रकार सुक्खा छ भने, त्यसोभए तपाईं गैल्भेनिक फेशियलको लागि रोज्न सक्नुहुन्छ।
यो अनुहारले तपाइँको छालामा नमी र हाइड्रेसन प्रदान गर्न सक्छ। यद्यपि यो महँगो फेशियल हो, यो सुक्खा छालाको प्रकारका मुद्दाहरूमा व्यवहार गर्न अत्यन्त प्रभावकारी मानिन्छ।
रायोको तेल र कस्टर तेल तेल कपाल को विकासको लागि
Ough. असह्य छालाका लागि चाँदीको अनुहार
तपाईंको छालाको सतहमा विषको संचयले यसलाई कुनै नराम्रो बनाउन सक्छ। यसैले यो एकै पटकमा हरेक पटक डिटोक्सिफाइ गर्न महत्त्वपूर्ण छ। यो गर्नको लागि उत्तम तरिका भनेको मासिक आधारमा चाँदीको अनुहार बनाएर हुनेछ।
यस अनुहारले तपाईंको छाला डिटोक्स गर्न र अशुद्धता, फोहोर र विषालु पदार्थहरूबाट मुक्त हुन सक्छ। त्यसो भए नरम र कोमल छाला लिन यस अनुहार प्रयोग गर्नुहोस्।
Colla. सेगिial छालाका लागि कोलाजेन फेशियल
सेगि skin छाला सबैभन्दा लोकप्रिय छालाको चिन्ताको विषय हो कि असंख्य महिलाहरू ग्रस्त छन्। यो प्राय: यस्तो हुन्छ जब तपाईंको छालाले कोलेजेन र ईलास्टिन गुमाउँछ।
१ गिलास गन्ना को रस कैलोरी
यो छालाको चिन्ताको सामना गर्न तपाईले कोलेजेन फेशियलको लागि जानु पर्छ। यो अनुहारमा, कोलेजेन-बढावा उत्पादहरु को उपयोग बनेको छ। तपाईंको छाला दृढ बनाउन कोसिस गर्नुहोस्।
Ull. सुस्त छालाको लागि सुनको फेशियल
प्रदूषित हावाको जोखिम, मृत छाला कोषहरूको निर्माण र छालाको उचित देखभालको अभावले तपाईंको छाला बिग्रिन सक्छ। यदि तपाईंको छाला बेजान देखिन्छ भने, त्यसोभए तपाईंले सुनको अनुहार बनाउनेबारे विचार गर्नुपर्छ।
यस अनुहारमा प्रयोग गरिएको चमक बढाउने तत्त्वहरूले तपाईंको अन्यथा सुस्त छालामा तत्कालको चमक प्रदान गर्न सक्छ।
बुढेसकालको छालाको लागि वाइन अनुहार
यदि तपाइँको छालाको मुख्य चिन्ता बुढेसकाल भइरहेको छ भने, त्यसपछि वाइन अनुहार तपाईंको लागि एक राम्रो विकल्प हुन सक्छ। यस अनुहारमा, पोलिफेनल तेल बुढेसकालको कुरूप संकेतहरू जस्तै राम्रो लाइनहरू, झुर्रीहरू, इत्यादिको विरूद्ध लड्न प्रयोग गरिन्छ।
यस विलासी अनुहारलाई तपाईंको छालालाई देख्ने र स्वस्थ बनाउन सहयोग गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
Tan. ट्यान्ड छालाको लागि डि-ट्यान फेशियल
हानिकारक यूभी किरणले गर्दा हुने क्षतिको उल्ट्याउनका लागि डि-ट्यान फेशियल सबैभन्दा प्रभावकारी अनुहार हो।
तपाईको घामले भरिएको छालालाई यसको मासिक आधारमा यस छालाको उज्यालो अनुहारको उपचार गर्नुहोस् यसको समग्र स्वास्थ्यलाई बढावा दिन र कठोर सूर्य किरणहरूको संपर्कमा परेका विकृतिबाट पनि छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ।
Ens। संवेदनशील छालाका लागि अक्सिजन अनुहार
संवेदनशील छाला पनि सजिलै चिलाउन सक्छ र अनुहार पछि लालिमा पनि देखाउन सक्छ। यस छालाको प्रकारका लागि, अक्सिजन अनुहार एक उपयुक्त उपचार हुनेछ।
यस अनुहारमा प्रयोग गरिएको क्रीम र मास्कहरूले छालामा हल्का प्रभाव पार्दछ। तपाईंको छालालाई हाइड्रेशन प्रदान गर्न र यसलाई ताजा र निर्दोष देखाउनको लागि यस अनुहारको लागि अप्ट गर्नुहोस्।
10. बिग्रिएको छालाको लागि डायमंड फेशियल
धेरै आन्तरिक र बाह्य कारकहरूले तपाईंको छालामा क्षति पुर्‍याउन सक्छ। यस प्रकारको छाला निर्जीव र गाढा दागले भरिएको देखिन्छ। यस प्रकारको छाला मर्मत गर्नका लागि, तपाईं हीराको अनुहार बनाउने विचार गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईंको छालालाई यसको प्राकृतिक रंग र चमक पुनः प्राप्त गर्न मद्दत बाहेक, यो अनुहारले दागहरू पनि हटाउन सक्छ।
नोट: यदि तपाई स्वास्थ्य समस्या वा कुनै गम्भीर छालाको अवस्थाबाट पीडित हुनुहुन्छ भने कुनै नयाँ अनुहार पाउनु भन्दा पहिले त्वचारोग विशेषज्ञको सल्लाह लिनु उत्तम हुन्छ।
कसरी वजन कम गर्न बन्दकोबी रस बनाउने
अंग्रेजीमा बसन्त पञ्चामीमा लेख
शुभकामना महिलाको दिन पत्नी उद्धरणको लागि शुभकामना
दिनहुँ कुखुरा खाने को साइड इफेक्ट
अलमारीमा लुगा कसरी मिलाउने
कसरी कपाल चम्किलो र बाक्लो बनाउन